मार्च १ the को राशिफल भनेको के हो? - राशिफल
मार्च १ the को राशिफल भनेको के हो?
प्रश्नहरू र उत्तम उत्तरहरू - मार्च १ Birth जन्मदिनको राशिफल
मार्च १ Z राशि चिन्ह: क्यान्सर
मा जन्मेका मानिसका लागिमार्च १कोराशिफलमीन हो। मीनको एक चरित्र चरित्र हुन्छ, तिनीहरू प्रायः उत्कृष्ट साझेदार हुन्छन्, किनकि तिनीहरू अत्यन्त प्रेमपूर्ण, मायालु र दयालु हुन्छन्।
तथ्य पद तपाईको जन्म महिनाले तपाईलाई प्रकट गर्ने कुराहरु प्रस्तुत गर्दछ जनवरीमा जन्मेका बच्चाहरु हठी र कट्टरपन्थी मानिन्छ जब उनीहरू बढ्दै जान्छन् महत्वाकांक्षी हुन जान्छन् जनवरीमा जन्मे तिमी मानिस हौ र तपाई मान्छे अवलोकन गर्ने र अध्ययन गर्ने मार्गको रुपमा अध्ययन गर्दैछौ। अरूको बारेमा र आफैंका बारे जान्नुहोस् जनवरी बच्चाहरूसँग पनि अरूलाई सिकाउने र मद्दत गर्ने प्रबल इच्छा हुन्छ। फेब्रुअरी, यदि तपाइँ फेब्रुअरीमा जन्मनुभएको थियो भने, तिनीहरू फेब्रुअरीमा धेरै कलात्मक र रचनात्मक हुन सक्ने सम्भावना छ - बच्चाहरू पनि धेरै स्मार्टका साथ फेब्रुअरीमा जन्मेका मानिसहरू स्वतन्त्र विचारकहरू हुने सम्भावना बढी हुन्छन् र कहिलेकाँही विद्रोही हुन्। राम्रो कुरा यो हो कि तिनीहरू वास्तवमै उनीहरूसँग सम्पर्कमा थिए। व्यक्तित्व र उनीहरू के चाहन्छन् जान्नुहोस् फेब्रुअरी बच्चाहरू कहिलेकाँही आक्रामक हुन सक्छन्, तर उनीहरूसँग पनि एउटा संवेदनशील पक्ष छ जुन मानिसहरूले वास्तवमै कदर गर्दछन् मार्चमा जन्मेका मानिसहरू प्राय जसो बढी तपस्यात्मक हुन्छन् जब तपाईं जन्मँदा मार्चमा जन्मनुभयो तपाईं सामान्यतया आफ्नो वास्तविक व्यक्तित्व राख्नुहुन्छ तपाईलाई कसैलाई राम्रोसँग थाहा नभएसम्म लुकाउने शिशुहरू प्रायः सबैका लागि राम्रा हुन्छन् र तिनीहरू सबैले सँगै बस्न चाहान्छन् किजले भने सद्भाव धेरै महत्वपूर्ण छ मार्चका बच्चाहरूको लागि मार्चमा जन्मेका मानिसहरू धेरै विश्वासयोग्य हुन्छन् जबसम्म यो विश्वास भंग हुँदैन तबसम्म सबै शर्तहरू हुन्छन्। अप्रिलमा अप्रिलमा बच्चाहरू प्राय: बलिया र खेलकुद हुन्छन्, तिनीहरू जहिले पनि उनीहरूको वरिपरि देखिन्छन् जो अप्रिलमा हुन्छन् उनीहरू प्रेमको ध्यानले जन्मेका हुन्छन् र उनीहरू थ्रिल खोज्नेहरू एक कारण हो ey जहिले पनि हतारमा हुन्छन् किनकि उनीहरू आफ्नो अर्को एड्रेनालाईन भीडको खोजी गर्दैछन् अप्रिल शिशुहरू प्रायः कुनै पलंग आलु हुँदैनन् यदि तपाई अप्रिलमा जन्मनुभएको थियो भने तपाईको जीवनमा धेरै कार्य र कार्य साहसिक सम्भावना हुन सक्छ धेरै मेमा जन्मेका धेरै व्यक्ति हुन सक्छन आकर्षक, उनीहरूको बायाँ मस्तिष्कको मस्तिष्कको दायाँ जी भन्दा आधा भन्दा बढी प्रयोग गरेर, जसको मतलब हो कि तपाईं संख्या भन्दा तथ्यसंगत हुनुहुन्छ र तथ्यहरू खुसी हुनको लागि तपाईं सुत्नको लागि महान् सपनाहरू गर्नुहुन्छ र तपाईंको भविष्यको लागि पनि यदि तपाईं मेमा जन्मनुभएको थियो। तपाईं दिन मा तर्क प्रयोग र रातमा ठूलो सपना। जुन जूनका बच्चाहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन् जुन जूनमा जन्मेको कसैलाई दु: ख दिन धेरै लिदैन तर उनीहरूले तपाईंलाई थाहा दिदैनन् किनकि उनीहरू अत्यन्तै शिष्ट जूनका शिशुहरू नरम-स्पोकन हुन्छन्, तर उनीहरूको शान्तिको कारणले मानिसहरू अक्सर सुन्छन्। तिनीहरूलाई र तिनीहरूले गम्भीरतापूर्वक तिनीहरूको सल्लाह लिन्छन्।
यदि तपाईं जूनको बच्चा हुनुहुन्छ भने अरू मानिसहरूलाई खुसी पार्न चाहानुहुन्छ जब तपाईं अर्को व्यक्तिको समान चीज चाहानुहुन्छ, यदि तपाईं अरूको पक्षमा खडा हुनसक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईं जुलाईको अवसरमा जन्मनुभयो भने तपाईं सधैं ऊर्जाले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ यसमा रमाइलो हुन्छ। तपाइँका साथीहरूसँग बस्नुहोस्, तपाइँको ज्वलन्त व्यक्तित्व हेर्नुहोस् र तिनीहरूलाई तपाइँसँगै बस्नुहोस्, आफैंलाई केहि भन्नुहोस्, यो केवल एक सेकेन्ड लाग्छ प्रफुल्लित वापसी ersonable के साथ फिर्ता आउन को लागी यदि तपाइँ अगस्तयु अगस्त मा जन्मनुभएको थियो बच्चा बच्चाहरु एक हुन सक्छ जन्म कार्यकारी अगस्ट शिशुहरूले यी नेतृत्व सीपहरू दुवै व्यवसाय र व्यक्तिगत जीवन दुबै फलिफापको लागि प्रयोग गर्दछ सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर शिशुहरू धेरै विवरण-उन्मुख छन् यदि तपाईं सेप्टेम्बरमा जन्मनुभयो भने तपाईं सम्भवतः सिद्धतावादी हुनुहुन्छ भने तपाईंसँग सधैं सबै उत्तम हुनुपर्दछ, र त्यसैले तपाईंको अपेक्षापनाबाट पनि व्यवसायमा मानिसका साथसाथै तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा सेप्टेम्बर बच्चाहरूको धेरै अपेक्षा हुन्छ संगठन र विवरणहरू र यदि कोही छोटो भयो भने सेप्टेम्बरले धेरै चाँडै आलोचना गर्नेछन् अक्टुबर अक्टुबरका बच्चाहरू धेरै हुन्छन्। ight र लापरवाह, तिनीहरू एकदम स्वतन्त्र छन्, यदि तपाइँ सेप्टेम्बरमा जन्मनुभएको थियो भने तपाइँ उज्ज्वल पक्षमा हेर्नुहुन्छ जब तपाइँ उज्ज्वल पक्ष देख्नुहुन्छ, तुरुन्तै राम्ररी देख्न सक्दैनौं, तब तपाइँले अक्टूबरमा जन्मेका धेरै व्यक्तिहरू भेट्टाउन प्रयास गर्नुपर्नेछ। जहाँसुकै गए पनि सौन्दर्य र रमाईलो छन् किनभने अक्टुबरका बच्चाहरू रमाईलो र कुराकानी गरिरहेका हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरूलाई नोभेम्बरमा साथी बनाउन सजिलो हुन्छ यदि तपाई नोभेम्बरमा जन्मे हुनुहुन्छ भने तपाईको जन्म मितिले प्रकट गर्ने कुराहरु नोभेम्बर महिनामा बच्चाहरू प्राय: धेरै जिद्दी हुन्छन् र धेरै गोप्य, जब नोभेम्बरको बच्चा साँच्चिकै केन्द्रित हुन्छ, खराब जुन महानताको लागि सम्भाव्यता यदि तपाई नोभेम्बरमा जन्मेका हुनुहुन्छ भने तपाई एकदम चाँडो र आत्म-प्रेरित हुन सक्नुहुन्छ नवजात शिशु कहिलेकाँही कसैको सहयोग लिन चाहँदैनन्, यदि कसैले एन गल्ती गरे पनि। यदि तपाईं नोभेम्बरमा जन्मनुभएको हो भने तपाईं हुर्कन सक्नुहुन्छ, तर मात्र यदि तपाईं डिसेम्बर बच्चाहरू बन्न चाहानुहुन्छ भने रमाइलो हुन्छन् र तिनीहरू ध्यान केन्द्रित हुन मन पराउँछन् जब उनीहरू मान्छेले भरिएको कोठामा हुन्छन् भने उनीहरूको ध्यान सबैमा हुनुपर्छ। Wer ई डिसेम्बरमा जन्म तपाई सायद घरमै धेरै सक्रियतासाथ बस्नुहुन्छ र टिभी हेर्नुहुन्छ जुन तपाईंको चियाको कप होइनन् डिसेम्बरका बच्चाहरू आफैमा गर्व गर्छन् र उनीहरू मलाई होईन कि तिनीहरू पनी तिनीहरूलाई पक्रन दिनुहुन्न। केहि रीब द्वारा बाध्यता तल तल टिप्पणी सेक्सनमा हामीलाई थाहा दिनुहोस् र तपाईं अधिकको लागि सदस्यता लिनुहोस्
मार्च १th एक मेष राशि हो?
मार्च १राशिफल व्यक्ति मीन- को कुपमा छन्मेष। हामी यसलाई पुनर्जन्मको कुप भन्छौं। यस csp मा हुनुको मतलब यो छ कि तपाईं नवीन, रचनात्मक, र आश्चर्यजनक हुनुहुन्छ।
हे, मेष। (शफल कार्ड) मार्च 8th को हप्ताको लागि तपाइँको पढ्नलाई स्वागत छ। यो हप्ता हामी यहाँ सुरु गर्दछौं।
म फेरि अलिक फरक चीजहरू गर्नेछु। म यस हप्ताको लागि तपाईंको सामान्य उर्जाको लागि यहाँ प row्क्ति तर्दैछु ताकि पहिलो प row्क्ति तपाईंको सामान्य उर्जा हुनेछ, तपाईंको दोस्रो प row्क्ति अवरोध वा अन्धा दागहरू हुनेछन्, केही पनि तपाईंले यस हप्ता आउँदै गरेको देख्नुहुने छैन। तपाईंको अर्को प row्क्ति कुनै अप्रत्याशित समाचार वा केहि पनि आउँदै गरेको तपाईंले देख्नुहुने छैन, म भन्नु पर्दछ, त्यसैले अधिक अप्रत्याशित जस्तै, र तपाईंको अन्तिम प row्क्ति तपाईंको अर्को चरणहरू हुनेछ जुन तपाईंले यहाँ जे पनि चाहानुहुन्छ प्राप्त गर्न आवश्यक छ। समय, मेष
निश्चित रूपमा मलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईं तल यस वितरणको बारेमा के सोच्दै हुनुहुन्छ। म यसमा काम गर्न मनपराउँछु र कसरी चीजहरू जान्छन्, तर मलाई तपाईले तल के सोच्नुहुन्छ सो दिनुहोस्। साथै, म अन्तमा तीन थप हो वा कुनै प्रश्नहरू सोध्छु, त्यसैले म यो गर्दछु, यो पज गर्ने समय आउँदा तपाईंलाई बताउँछु, र म यो लेख पज गर्दछु किनकि मैले तीन हो वा कुनै प्रश्न सोध्ने छैन।
म तीन कार्डहरू कोर्न जाँदैछु, र म तपाईंलाई केवल द्रुत हो वा होईन ती कार्डहरूमा आधारित छैन, तर मेष, हामी तपाईंलाई के हुँदैछ हेरौं। मैले यहाँ एउटा कार्ड छोडे। मलाई थाहा छैन मैले यो कसरी गरें, तर यहाँ यसलाई तानौं र हामी यहाँ तपाईंको लागि के छ हेर्नुहोस्, मेष।
यहाँ तपाईको सामान्य उर्जाहरु मध्ये पृथ्वी म्याजिक कार्ड छ। मलाई लाग्छ कि यसले यो सबै यहाँ एकसाथ राख्छ, र अन्तमा, जहिले पनि मैले होलिस्टिकली पढ्छु, म यहाँ जे पनि छ सबैलाई ध्यानमा राख्दछु, यद्यपि हामीले मूलरूपमा प्रश्नहरू छुट्याउँदा पनि। के मँ भन्छुँ यहाँ सबै कुरा हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ केहि ग्राउन्ड गर्न आवश्यक छ।
केही गर्नु पर्ने हुन्छ मलाई साथीहरू जस्तै लाग्छ वा केहि मानिसहरु छन् जसले तपाईलाई केहि वास्तविक बनाउन मद्दत गर्न सक्छन। यो लगभग यस हप्ताको रूपमा तपाईंलाई यस हप्ता वर्णन गर्न उत्तम तरिका हो, तपाईं जस्तो कमजोरीलाई सुदृढ पार्ने जस्तो। तर त्यो मेष राशिको खराब चीज होइन, तर मलाई लाग्छ कि तपाई त्यस्तो व्यक्ति फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुनfप्रकारको हो यदि त्यसले समझ बनाउँदछ भने, त्यहाँ एउटा अन्तर हुनेछ।
प्रेममा रहेका तपाईंहरू मध्ये कसैको लागि यो यस्तो हुन सक्छ कि यो तपाई जस्तो हो कि तपाईसँग पूरक सीप छ वा तपाई दुबैको बधाई छ, जुन म खोजिरहेको छु, तर यो एक अर्काको राम्रोसँग पूरक हो भने। उही, काम वा व्यवसाय, जे पनि तपाईं यहाँ मेष प्राप्त गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, मसँग यस्तो भावना छ कि तपाईं कसैलाई भेट्टाउनुहुनेछ, वा कम्तिमा तपाईंसँग पूरक सीप भएको व्यक्ति भेट्टाउने विकल्प छ र त्यसले चीजहरू बनाउनेछ ...
मलाई शब्द सुचारु नौका दिमागमा आउँछ किनकि म यो भन्दै छु, त्यसैले मलाई लाग्छ कि यस हप्ता सामान्यतया तपाईले सजिलो डु energy्गा उर्जा सिर्जना गर्ने तरिका भनेको त्यस्तो व्यक्तिलाई भेट्टाउनु हो जसले पूरक सीप वा यी लाइनहरूमा केहि गर्न सक्दछ। तपाईंसँग The Fool, कपको Ace, र शक्ति कार्ड यहाँ छ। केही कारणहरूले गर्दा म तपाईंबाट यो उर्जा प्राप्त गर्दछु जुन म आफैंमा केन्द्रित हुन्छु, वा म आफैंलाई कसरी प्रस्तुत गर्छु भन्ने बारे सँधै केहि प्राप्त गर्छु।
तपाईंसँग यहाँ तल रानीको रानी पनि छ र त्यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आफैंले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि मलाई लाग्छ कि तपाईंहरू परिवर्तन हुन प्रयास गरिरहनु भएको छ। करिश्मा जस्ता यी शब्दहरू पाउँदछन्, तपाईंलाई थाहा छ, यी प्रकारका शब्दहरू जुन तपाईं आफैंलाई यहाँ संसारमा कसरी देखाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने थियो, मेष, र मलाई लाग्छ कि तपाईं मध्ये धेरैले यी सीपहरू विकास गरिरहनु भएको छ वा यी सीपहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। बढि क्यारिज्म्याटिक बन्नुहोस्, वा उनीहरूले आफ्नो क्षमतालाई सुधार गर्नका लागि कौशलता विकास गर्छन् जसरी तपाईं आफैंलाई संसारमा देखाउनुहुन्छ। यहीँ म यहाँ पुग्ने पहिलो चीज हो।
दोस्रो कुरा मैले प्राप्त गरे कि तपाईले यहाँ केही चीजहरूका लागि विश्वासमा उफ्रिन तयार हुनुहुन्छ जुन तपाईको लागि यहाँ अत्यन्तै पूर्ति गर्दै छ। शब्द मात्र ध्यान दिमागमा आउँछ। मलाई लाग्छ तपाईं यस जुनसुकै तरिकाले लिन सक्नुहुन्छ, मेष।
मलाई लाग्छ तपाईं कसैको लागि यो शाब्दिक रूपमा तपाईंको आत्माको फोकस हो। त्यहाँ एक चीज छ जुन तपाईंको आत्माले केन्द्रित गर्न चाहन्छ। तपाईको मनसाय जस्तै यदि म त्यो शब्द सहि उपयोग गर्न सक्छु? तर मलाई पनि यस्तो लाग्छ कि यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
केहि तपाइँको सबैभन्दा ध्यान केन्द्रित केहि हुन्छ। म आफ्नो पेन्टेकलहरु का सात लाई देख्छु जुन तपाईको अवरोध को क्षेत्र मा पप अप गर्दछ, तर एकै साथ म देख्न को लागी केहि को रूप मा तपाईं केहि मा ध्यान केन्द्रित र यहाँ सबै एक साथ फिट छ। म यस्तो प्रकारको छक्क परें कि त्यहाँ यस डेकमा कार्डिनल कार्ड छ जुन ...
मलाई थाहा छैन के यो भनेको हो, तर यो मूलतः ब्लकहरूको गुच्छा सँगै आउँदैछ, र मलाई लाग्छ कि यो सातवटा पेन्टाकलमा। यो तपाईंको उद्देश्यमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न र तपाईंको फोकसलाई तपाईंको जीवनमा त्यस्ता चीजहरूबाट टाढा लैजानु हो जुन महत्त्वपूर्ण छैन। मलाई लाग्छ कि सबै कुरा एक साथ आउँदैछ।
हुनसक्छ तपाई प्रेम चाहानुहुन्छ, हुनसक्छ तपाई अझ राम्रो स्वास्थ्य वा जे तपाई चाहानुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि तपाईं यहाँ आफ्नो ऊर्जा च्यानल बनाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो लाग्छ यदि तपाइँ आफुलाई एक शौकको लागि प्रोजेक्टरमा राख्नुहुन्छ वा केही गर्न तपाईलाई रमाईलो हुन्छ, र त्यसैले किन पातलो gsare तपाईंको लागि काम गर्न सुरु गर्दछ जब चीजहरू तपाईंको लागि काम गर्न थाल्छन्।
यदि होईन भने (कार्डहरू शफल) फेरी मसँग तपाईंको लागि चीजहरू हुन्छन्। मँ केहि कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछु कि प्रकारले तपाईलाई यहाँ भर्दछ, तर हामी त्यसलाई सिधा बनाउँछौं। तपाईं संग तरबार को दस छ।
मलाई लाग्छ कि त्यहाँ केही प्रकारको अन्त्य छ र यहाँ एक नयाँ सुरूवात छ। स्पष्ट रूपमा तपाईंसँग The Fool छ, जुन सबै कुरा नयाँ विश्वासमा उफ्रिने बारेमा छ, मगहरूको रानीले यहाँ निश्चित रूपले जीवनमा केही कुरा ल्याउँदछ, र चारवटा वs्ड। तपाईंहरू मध्ये कोही विवाहबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ, वा तपाईं यहाँ सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा अलग गर्न सक्नुहुन्छ, र यो यहाँ यस पढाइमा देखाइदै छ, तपाईं त्यो देख्नुहुनेछ जुन तपाईं कसैको लागि, तर धेरै जसो मलाई लाग्छ कि यसले यसबारे कुरा गरिरहेको छु। ।
चार वंड्डहरू पनि पोर्टलको माध्यमबाट प्रवेश गर्छन् र शक्ति कार्डको साथ यो तपाईको कामका लागि धेरै ध्यान दिएर हेर्नु जस्तै हो? स्ट्रेंथ कार्ड शक्ति प्रदर्शन हो त्यसैले मलाई लाग्छ कि तपाईं आफ्नो कडा परिश्रमको लागि चिनिनुभयो। तपाईंको अर्को प row्क्तिमा, कुनै अवरोध वा अन्धा ठाउँहरूका लागि यो हप्ता तपाईंलाई लाग्छ, यो इमान्दारिक रूपमा अन्धो ठाउँमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ एउटा ब्लक छ जुन हामीसँग छ।
म यसको बारेमा कुरा गर्छु, तर तपाईंसँग सफलता कार्ड छ। यो वास्तवमै राम्रो नक्शा हो र मलाई लाग्छ कि यो त्यहाँ छ ...
मलाई लाग्छ यहाँ केहि चीजहरु छन् जुन तपाईले यहाँ केन्द्रित गर्नु पर्छ। प्यान्थरले विषाक्त उर्जा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। मसँग अन्य डेकहरू छन् जुन उनीहरूमा एक पेन्थर छ र तिनीहरू भन्छन् कि पैंथरले त्यो विषाक्त उर्जाको केही तरीकालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ वा विषाक्त चीज हटाउन आवश्यक छ, मलाई लाग्छ तपाईंहरूसँग यो हुन सक्छ ...
मलाई लाग्दैन कि यो विषाक्त छ जस्तो कि तपाई यसको बारेमा सोच्नु हुन्छ, यहाँ पनि होइन, मेष। म तपाईंहरू मध्ये केहीको साथ महसुस गर्दछु, यो तपाईंको लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा मात्र हो जस्तो मैले पहिले भनेको थिएँ, र मलाई यस्तो लाग्छ कि यो यही हो जुन सबैभन्दा प्रेमीहरू वा सबै भन्दा बढि तपाईं जीवन पाउन चाहानुहुन्छ। अरूलाई मैले महसुस गरें कि तपाईको लागि सफल हुन सक्छ।
फेरि, यो एक अन्धा स्थान जस्तो छ, त्यसैले केहि सफल हुन सक्छ र यो यस्तो हो कि तपाईंले यो नदेखी सक्नुहुनेछ। त्यसोभए के सफल हुन सक्छ? सातवटा पेन्टेकलहरूले मलाई सबै कुरा बताउँदछ जुन मलाई थाहा हुनुपर्दछ। पेन्टेकलका सातले मलाई भन्छ कि तपाईं केहि चीजको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ।
त्यसोभए म के भन्ने छु जुन तपाइँको बारेमा धेरै सोच्नुहुन्छ, जे तपाइँ तपाइँको बारेमा धेरै सोच्नुहुन्छ र जे तपाइँले ढिलाइ गर्नुहुन्छ शायद तपाइँमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ र हुनसक्छ जुन धेरै सफल हुन सक्छ, हुनसक्छ तपाइँले यस बारे धेरै सोचविचार गरी एक व्यापार शुरू गरेपछि। हुनसक्छ तपाई नयाँ क्यारियर सुरु गर्ने बारे बढि सोच गर्दै हुनुहुन्छ। जुनसुकै भए पनि, सेन्टेन्टलका सात भन्छन् मलाई लाग्छ यो परिवर्तन लायक छ।
नम्बर दोस्रो, म यहाँ छिमेटाहरूको नौ बिहानमा छुँदा समयको बारेमा जान्नको लागि। तपाईं कसैको लागि यो केवल एक समयको मुद्दा हुनसक्दछ जुन केहि समय पहिले तपाईंले सुरू गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले यो सात पन्टाकल्सबाट सुरू गर्न चाहानुहुन्छ, मलाई लाग्छ त्यहाँ अवरोध छ, र मलाई लाग्दछ कि अवरोध सम्बन्ध हुन सक्छ। दुई कपको साथ। तपाईं कसैको लागि यो एक खास सम्बन्ध हो, जहाँ तपाईं एक व्यक्तिसँग चक्र दोहोर्याउनुहुन्छ।
मलाई लाग्छ कि यो धेरै पटक समाप्त भएको छ, तर मलाई लाग्छ कि यो व्यक्ति अझै बाँकी छ ...
मसँग अनौंठो शब्दहरू हुन्छन् जस्तै उनीहरूको हुकहरू तिमीमा छन् वा अरू केहि त्यसैले म यो प्रेम प्रेमको जस्तो महसुस गर्छु जहाँ व्यक्ति अझै तपाईंमा हुकहरू छन्, यो जस्तो हो कि तिनीहरू अझै पनि हो, र त्यसैले चक्र दोहोर्याउनुहोस्। तपाईंसँग यहाँ बच्चाहरू मेनू छन् त्यसैले तपाईं कसैको लागि यो बच्चाहरू हुन सक्दछन्। अरूलाई म यो महसुस गर्छु जस्तो लाग्छ।
म यहाँ धेरै संलग्नता देख्छु। त्यसोभए मलाई लाग्छ यो एउटा उलझन हुन सक्छ, तपाईले जे भन्न चाहानुहुन्छ, जे पनि तपाईले कल गर्न चाहानुहुन्छ। त्यसोभए यसलाई सफा गर्नुहोस् र हामी कसरी यी अवरोधहरू र यी अवरोधहरू वा अन्धा स्पटहरू (शफलिंग कार्डहरू) लाई कसरी पार गर्न सक्छौं भनेर हेरौं। Wands को।
Wands को Nine एकदम विशिष्ट छ, Wands को Nine भन्छ कि त्यहाँ केहि हुन्छ जुन तपाईलाई धेरै हुन्छ जुन तपाईको आवेशमा फर्किनु पर्छ। अहिले जुनसुकै समस्याको साथ समस्या छ, विशेष गरी पिसिसिसको नेप्च्यूनमा, हामी अबसम्मकै राम्रो आइसक्रीम स्यान्डविच बनाउन उत्सुक हुन सक्छौं र हामीलाई लाग्छ कि म आइसक्रिम बनाउनको लागि ब्यापार सुरु गर्ने छु? क्रीम स्यान्डविच, म यस चीजको बारेमा ठट्टा गर्दैछु। मान्छेलाई लाग्छ कि म ठट्टा गर्दैछु, तर मात्र पर्खनुहोस् र हेर्नुहोस्।
हामी २०२25 सम्म नआउन्जेल पर्खनुहोस्। हामी मान्छेहरू कपासको मिठाईका स्टोरहरू देख्दछौं। हामी सायद व्यक्तिहरूसँग स्टोरहरू हेर्नेछौं जहाँ उनीहरू स्टोरमा स्केटबोर्डिंग गर्दै छन्, सबै किसिमका पागल चीजहरू, हैन त? र तपाइँलाई थाहा छ मलाई थाहा छैन काममा के हुने हो सो भन्दा त्यहाँ पागल चीजहरू हुनेछन्।
त्यसोभए यसको मूल अर्थ यो छ कि त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईलाई धेरै भावुक हुन्छन्, तर यो सायद अलि अलि हास्यास्पद देखिन्छ, वा यस्तो लाग्दछ कि तपाईले यसलाई पाउन सक्नुहुन्छ, र मलाई लाग्छ कि तपाईले यस भावनालाई पार गर्नुपर्नेछ। नौ तरवारहरु संग तपाइँ संग दुई कप फेरि छ। तपाईले सफल चीजहरू देख्नुहुन्छ जुन यहाँ सफल हुन सक्छ, तर यो तपाई जस्तो छ कि तपाईसँग अझै पनि यो उल्टो अवस्था छ, हुनसक्छ एक व्यक्तिसँग।
त्यसैले मलाई लाग्छ यो तपाइँको लागि चुनौतीको एक सा हो। तपाईंसँग यहाँ चारवटा च्यासीहरू छन्। मेरो मतलब, तपाईं मध्ये कोही यस्तो हुन सक्नुहुन्छ (कार्डहरू बदल्नुहोस्) मलाई लाग्छ कि तपाईंले भर्खर आफ्नो नयाँ प्रेममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ, कपको सात यहाँ, र त्यहाँ धेरै खतराहरू हुन सक्ने पनि हुनसक्छन्, मेष।
मलाई लाग्छ कि त्यहाँ धेरै डरहरू छन् जुन तपाईंलाई नयाँ प्रेमतर्फ अघि बढ्नबाट रोक्न सक्छ, त्यसैले मलाई लाग्छ कि ती पेन्टेकलहरु का सात ती कपहरुमा देखा पर्न चाहन्थे, मेष।
मेरो लागि, त्यो चिच्याउने प्रशस्त मानसिकता हो। कहिलेकाँही हामी लाग्छौं हामी यी टेang्गल र मापनमा जान्छौं, जहाँ तपाईं लाजलाग्दो भन्न चाहानुहुन्छ, जहाँ हामी केहि गर्छौं, हामी कहाँ छौं, हामी कामहरू गर्न थाल्छौं। मलाई लाग्छ जब हामी आफैंसँग इमानदार छौं र जब हामी एक अर्कासँग कुरा गर्छौं, सायद हामी त्यस्तो व्यवहारलाई रीस देखाउन थाल्छौं, वा हुनसक्छ हामी सम्बन्ध वा कुनै चीजमा अनावश्यक व्यवहार व्यक्त गर्न थाल्छौं।
मलाई लाग्छ यदि हामी त्यसो गर्छौं कि हामीले आफैलाई बोलाउँदछौं, तब हामी यस्ता अवस्थाबाट बाहिर जान सक्दछौं। म तपाईंलाई यो बताउन आवश्यकता महसुस गर्दछु, त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो तपाईंको लागि सन्देश हो, मेष। मलाई विश्वास गर्नुहोस् मैले यो गरें।
हामी सबै, ठीक छ? म यहाँ तपाईं वा केहि आलोचना गर्न यहाँ छैन। जस्तो कि मैले भनें, म यो कार्यको लागि सबैभन्दा दोषी व्यक्ति हुँ। म ठीक माछा हुँ? म एक दुलही हुँ यसैले मलाई विश्वास गर्नुहोस् म यो पाउँदछु, तर म तपाईंहरूसँग केही महसुस गर्दछु, यो त्यस्तो तरिका हो यदि तपाईं यसलाई साँच्चिकै हेर्नुभयो भने तपाई सायद त्यस्तै कामहरू गरिरहनु भएको जस्तो हुनुहुन्छ, जस्तै, मैले किन गरे त्यो सम्बन्धमा? मलाई भावना छ यदि तपाईंले आफूलाई बोलाउनु भयो भने तपाईंले यो देख्नु हुनेछ, तर मलाई लाग्छ बहुतायत मानसिकता राम्रो विचार हो।
हुनसक्छ तपाईलाई लुगा लगाउन आवाश्यक छ, हुनसक्छ तपाई बाहिर जानु पर्छ र केही व्यक्तिलाई खोल्नु पर्छ, र तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ, हे भगवान, प्रचुरता मानसिकता, मैले काम सकें। प्रेममा यसको बारेमा चिन्ता नगर। तपाईंको अर्को प row्क्तिमा, अप्रत्याशितको लागि, म होशियार रहनेछु नम्बर एक मेष बच्चा, यदि तपाईं गर्भवती हुन कोशिस गर्नुहुन्न भने म अब धेरै सावधान हुने थिएँ।
तपाईंसँग पनि मार्ग नक्शा छ। Wands को चार संग, Wands को चार एक विवाह हुन सक्छ, तर Wands को चार एक मार्ग प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ। यो पोर्टलको कार्डको कार्डको बीचमा यहाँ छ, र यो एक अनियमित कार्डको प्रकार हो।
यो यस्तो प्रकारको नक्शाको प्रकार हो जुन धेरै तरिकामा ध्वस्त हुन्छ किनभने तपाईलाई थाँहा छ, यो ती मध्ये एक चीज हो जुन यसले यो नक्शामा ११-११ लाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसैले यो पोर्टल हो जुन तपाईको लागि खोल्न सक्छ, तर तपाईसँग यो छ यहाँ कपको पाँच, कपको चार र वान्ड्सको रानी। यहाँ यस पढाइमा तपाईको धेरै ऊर्जा यो छ कि तपाईले पथ खोलिरहेको देख्नुपर्दछ, र तपाई अडिनु भएको छैन भनेर तपाईले बुझ्नु पर्छ। तपाईंसँग पाँचवटा गोब्लेट छन्।
यदि ऊ यहाँ फर्क्यो भने, उनले यी दुई गोलहरू देखे। ऊ रोइरहेको छ किनकि उसले ...
ऊ स्पिल्ड वाइनमा रोइरहेको छ, दूध नखुलेको, र उसले दाखमद्यको लागि आफ्नो स्वाद हराएको छ, र त्यसैकारण ऊ रोइरहेको छ, तर उसको पछाडि केहि छ र त्यो अझ राम्रो हुन सक्छ, तर उसले यसलाई प्रयास गरेको पनि छैन। केवल त्यो मात्र होइन, ऊ पनि रुँदै छ किनभने ऊ पौडिन सक्दैन र ऊ त्यस किल्लामा पुग्न सक्दैन, तर यदि तपाईले चारै तिर मोड गर्नुभयो भने उसले दुई कप पाउँला, तर उसले लक पनि पाउँदछ किनकि उसले देख्यो त्यो पुल जसले महलमा पुर्‍याउँछ। तपाईं कसैको लागि, मलाई लाग्छ तपाईं यहाँ धेरै ध्यान दिन सक्नुहुन्छ।
पेन्टेकलको सात। पेन्टेकलको सात, उसले पेन्टेकलतिर हेर्छ। उसले भन्छ कि मैले पर्याप्त काम गरेको छु? के म अझै यहाँ छु? के मँ अझै पनि यो सम्बन्ध मा काम गर्न छ? के मँ अझै पनि यो असफल व्यापार मा काम गर्न छ? मैले के गर्नु पर्छ? र यदि ऊ फर्कियो भने, उनले यो लक देख्दछन्।
यो त्यहाँ प्रस्ताव वा अवसरहरू जस्तो छ र मेरो विचारमा तपाईंको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ती अवसरहरू खोज्नु वा उनीहरू के हुन् हेर्नुहोस्। धेरै हिसाबले, फेरि, तपाइँको उत्तर छडकी रानी हो। हामी स्पष्ट हुँदै जान्छौं, र हामी तपाईंको वास्तविक उत्तर के हो भनेर हेर्न जाँदैछौं।
छडीको रानीमा सबै उर्जा छ। लाठीको रानी भन्छिन् जहाँ तपाईं आफ्नो मन र आत्मा राख्न सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ समस्या अहिले न्याय हो। जस्तो मैले भनें, यो यस्तो छ कि हामीसँग धेरै नै निर्णयहरू छन् जहाँ हामीलाई लाग्छ केही हाम्रो लागि काम गर्न सक्दैन। वा हामी केवल सोच्छौं कि केहि सफल हुने छैन, त्यसैले हामी यो गर्दैनौं, हैन? जे भए पनि यो क्यारियर, व्यवसाय वा सम्बन्ध वा त्यस्तो केहि हो।
हुनसक्छ हामी सोच्दछौं कि केहि पनि कहिले असम्भव हुन सक्छ। हुनसक्छ यो केही टाढाको हो, तर हामीले महसुस गरेनौं यदि हामीले भर्खर शुरू गरेका छौं, यदि हामीले हाम्रो खुशीलाई पछ्यायौं भने, यदि हामी हाम्रो आनन्दलाई पछ्याउँछौं भने बाटो खुलनेछ र मैले यहीँ तपाईको लागि महसुस गरें, मेष। तर मेष, (शफल कार्ड) यसलाई सफा गरौं र हामी तपाईंको लागि के लिन्छौं।
यो सूर्य, धिक्कार छ, मेष, खुशी, आनन्द, ज्ञान। जादुगर, तपाईले चीजहरू देखाईएको छ, तर तपाईलाई थाहा छ, उसले यी सबै कपहरू चार कपहरूमा प्रकट गर्दछ। समस्या यो हो कि उसले प्रकट गरेका चीजहरू वास्तवमा उनि जस्तो देखिन्छन् जस्तो देखिँदैन।
त्यसैले कहिलेकाँही मलाई भावना हुन्छ कि हामी चारवटा कटोराको बारेमा थोरै कम पिक्की हुनु पर्छ। वास्तवमा, मलाई जादुगरको साथ तपाईको बारेमा के महसुस हुन्छ त्यो यो मूलतः एक चरण हो। यदि हामी केहि लागि तयार छैनौं, ब्रह्माण्डले हामीलाई केही चीज ल्याउन सक्छ जुन परिक्षण हो, वा ब्रह्माण्डले हामीलाई त्यस्तो चीज ल्याउन सक्छ जुन हामी चाहँदैनौं, तर यसले हामीलाई अर्को स्तरमा गर्न लगाउछ, र त्यहि म हुँ। तपाईं मेष राशि को लागी यहाँ महसुस।
यस कार्डको साथ, यो यस्तो छ, हुनसक्छ तपाईं प्रेम चाहानुहुन्छ, र हुनसक्छ ब्रह्माण्डले तपाईंलाई कसैले डेटमा लैजान चाहान्छन्, तर हुनसक्छ तपाईं होईन र भन्नुहुन्न, हो होइन, किनभने यसो गर्नुहोस् के त्यो व्यक्तिले विवाह गर्नुपर्दैन, केवल मितिमा बाहिर जानुहोस्, हैन? मलाई लाग्छ धेरै व्यक्तिले तिथिहरु रद्द गर्छन् किनकि व्यक्ति परिपूर्ण छैन वा उनीहरूले छ अंकको संख्या गरिरहेका छैनन् वा जे पनि हो, ठिक हो? म पूर्ण रूपमा बुझ्छु, म पूरै बुझ्दछु, हैन? हामी सबैको मापदण्ड छ। म झूट बोल्छु यदि मैले यो पी हो भने। के यो स्तर बिना नै सम्भव छ, हैन? तर के मँ भन्छु कि मलाई लाग्छ कि धेरै व्यक्तिहरु आफैलाई खुट्टा मा गोली हानि को तथ्य को लागी तपाई एक व्यक्ति को तारीख छैन।
यो एक व्यक्ति खोज्नको लागि के गर्नुपर्दछ, विशेषगरि ब्रह्माण्डले काम गर्ने तरीकाको साथ। त्यसैले ब्रह्माण्डले तपाईंलाई अवसरहरू प्रदान गर्न सक्दछ। यी पूर्ण अवसरहरू छैनन्, तर म तिनीहरूलाई जे भए पनि लिन्छु।
म यो पनि भन्न सक्छु कि यदि तपाईं यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, म यहाँ केहि प्राप्त गर्न सक्दछु - अस्थायी काम, यदि तपाईं एउटा सम्झौताको आधारमा काम गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ वा त्यो प्रकारको काम पनि गर्नुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ जस्तो कि यहाँ लाइनहरू तपाईं यहाँ आउन सक्नुहुनेछ जस्तो देखिन्छ कि यो एक आदर्श ग्राहक छैन वा केहि सही छैन। यो तपाईले अपेक्षा गरेको भन्दा थोरै पैसा हुन सक्छ, तर मलाई लाग्छ कि यसले धेरै ठूलो चीज ल्याउनेछ र मलाई लाग्छ म यहाँ प्रेममा छु यदि तपाई प्रेमको खोजीमा हुनुहुन्छ भने। अर्को तपाईंसँग तापमान कार्ड छ।
हो, तपाईं संयम नक्शाको साथ स्थिति उल्टाउन सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि टिमरेसन कार्डले यसो भनिरहेको छ कि तपाई वास्तवमै आफ्नै वास्तविकता यहाँ सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै भव्यतामा, मेष। त्यसो हो, सुपर शक्तिशाली पढाइ।
र तपाईंको अर्को प row्क्ति तपाईंको अर्को चरणहरूका लागि, तपाईंसँग सह-सिर्जना कार्ड छ। म निश्चित रूपमा यहाँ टीम वर्क र सह-रचनामा ध्यान केन्द्रित गर्दछु। शुभकामना यहाँ तपाईं आउँछ, मेष।
त्यसोभए, मैले पढको सुरुमा भनेको जस्तै, मलाई त्यहाँ खाली स्थानहरू भर्ने कोही छ जस्तो लाग्छ ...
त्यो प्रेम र व्यवसायमा हुन सक्छ, हुनु पर्दैन ...
यो केहि पनि हुन सक्छ। र मलाई लाग्छ कि कोही हिँडिरहेको छ जसले पेन्टेकलको छेउमा केही खाली ठाउँहरू भर्न सक्छ, तरवारको दुई र तरवारको नाइट। म त्यस्तो किसिमको उर्जालाई मन पराउँछु किनभने यो लगभग यस्तो छ कि तपाईं हतार गर्नुहुन्न।
तपाईंलाई थाहा छ, म प्रायः महसुस गर्दछु कि त्यहाँ तरवारहरूको नौ र तरवारहरूको नाइट वरिपरि हडबड भएको छ, तर चीजहरू बिस्तारै लिनको लागि मैले यस शक्ति प्राप्त गर्दछु। यो यस्तो हुन सक्छ कि हुनसक्छ तपाईले कसैलाई तपाईको व्यवसायमा सहयोग पुर्‍याउन स्वीकार्नु भयो, मलाई लाग्छ कि तपाईले केवल चीजहरुलाई विकासको लागि अनुमति दिनुहुन्छ। तपाईले हेर्नु भएको कुरा के हुँदैछ।
यो तरवार को दुई संग क्षेत्र को अज्ञात छ, तर मलाई लाग्छ तपाईं तरवार को नाइट संग यो जे भए पनि गरिरहेको छ। म वास्तवमा तरवार को दुई लाई मन पराउँदिन किनकि तरवारका दुईले मलाई बताउन सक्छ कि तपाई अडिएर बस्नु हुन्छ र घुमाउनु हुन्छ र तपाईको पछाडि यी देशहरुमा पुग्नुहुन्छ किनभने त्यहाँ सफलता नै छ, तर केहि कारणले गर्दा मलाई लाग्छ कि तपाईं तलवारहरूको यो नाइटको साथ यहाँ घुमाउँदै हुनुहुन्छ, तर हामी यो सीधा गरौं। तपाईंसँग छडीको ऐस छ, एक धेरै जोशिलो ताजा सुरूवात।
यदि तपाईं यहाँ कसैको साथ नयाँ सुरुवात गर्नुभयो भने, यो धेरै सफल हुनेछ। Wands को राजा ईश्वरीय समकक्षहरूलाई हेर्दै, Wands रानी, ​​Wands को राजा यहाँ छ, त्यसैले यो पक्कै तपाईं र कपको सातौं को लागी आउन सक्छ प्रेम हुन सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि तपाई यस हप्ता यहाँ छनौटको लागि बिगार्नु हुनेछ, मेष, र मलाई लाग्छ तपाईको अर्को चरणहरु सह-सृष्टिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ वा केहि हेर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईको जीवनमा ल्याउने खुशीले ल्याउँछ।
यी सबै पढाइ आनन्द, आनन्द, सूर्यमा खुशी, डेकमा सब भन्दा भाग्यशाली कार्डको बारेमा हो, त्यसैले मलाई लाग्छ कि तपाईको जीवनमा केहि चीज बनाउन चाहानुहुन्छ, र मलाई लाग्छ कि तपाईले यसलाई सिर्जना गर्नुपर्दछ। यो धेरै सजिलो छ। तर मेष, हामी अब हो वा कुनै प्रश्न सोध्ने छैनौं।
त्यसो भए यदि तपाईंसँग तीन सम्म हो वा कुनै प्रश्नहरू छैनन्, र ती यहाँ तीन कार्डहरू छन्। एक, दुई, र तीन, लेख रोक्नुहोस् यदि तपाईंलाई यहाँ प्रश्नहरू विचार गर्न समय चाहिन्छ, मेष, तर हामी सुरु गर्दैछौं। कार्ड नम्बर एकको लागि म हो, कपको रानी यहाँ हुँ।
यो कपको यस रानीको छेउमा सहजै माथि आयो। मँ तपाई यहाँ केहि चीज राख्न को लागी एक भावना छ, त्यसैले फेरि, जुनसुकै प्रश्न नम्बर एक छ, मलाई लाग्छ तपाईले तपाईको अन्तर्ज्ञानमा विश्वास गर्नुपर्दछ, तर मलाई पनि लाग्छ कि तपाईले आफ्नो सबै कोमल मायालु हेरचाह संग केहि गर्नु पर्छ, चाहे यो हो। एक सम्बन्ध, एक व्यापार, एक काम, तपाईको स्वास्थ्य, यो डरलाग्दो छैन, तर मलाई लाग्दछ कि यदि तपाईले केहि ध्यान राख्नु भयो भने यो हुन्छ हो। कार्ड नम्बर दुईको लागि, तपाईंसँग, हो, म विश्व भन्छु।
विश्व एक धेरै राम्रो कार्ड हो, त्यसैले त्यसैले म हो भन्न सक्छु, विशेष गरी यदि यो कुनै प्रकारको गन्तव्य हो। कार्ड नम्बर तीनका लागि तपाईसँग नौ वन्ड्स छन्। मलाई अहँ छैन
मलाई भावना छ कि त्यहाँ केही अवरोधहरू छन् कार्ड नम्बर तीनको साथ। यी कुरा हो भने वा कुनै प्रश्नको साथ म भन्न चाहन्छु कि तपाईं आफ्नो वास्तविकताको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। कार्डहरूले तपाईंको आफ्नै वास्तविकतालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यसैले यो एक हो, छैन, Wands को नौ, तपाईं कि ऊर्जा संग काम गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यो त्यहाँ म भन्छु, तर यो यहाँ राम्रो पढिएको छ, मेष, मलाई यो मन पर्छ। त्यसैले मेष हेर्नका लागि धन्यबाद। म यसलाई धेरै कदर गर्छु।
तपाईंको सूर्य, चन्द्रमा, र यो हप्ता तपाईंको लागि के भइरहेको छ को एक पूर्ण तस्वीर को लागी निश्चित गर्नुहोस्। मसँग तल एउटा लेख छ र यसले कसरी तपाईंको सूर्य, चन्द्रमा र सूर्योदय पत्ता लगाउँदछ भनेर वर्णन गर्दछ। मनपराउन र सदस्यता लिन स्वतन्त्र महसुस, वास्तव मा समर्थन को लागी कदर गर्नुहोस्।
जे भए पनि, मलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाइँ यस फैलावटको बारेमा के सोच्नुहुन्छ, तर आफैलाई के, मेष, र निश्चित रूपमा तपाइँको हप्ता आनन्द लिनुहोस्।
के मीनहरु संग संगत छैन?
मीन अनुकूलताको सारांश
मीनको साथ सबै भन्दा मिल्दो संकेतहरू सामान्यत: वृष, कर्क, वृश्चिक र मकर मानिन्छ। मीनसँग कम से कम मिल्दो संकेतहरू सामान्यतया मानिन्छमिथुन र धनु।
कन्याको कन्जर्वेटिभ प्रकृति मिथुनको बाहिर जाने व्यक्तित्वसँग मेल खाँदैन र जेमेनी फलिफाप हुने कुनै पनि परिस्थितिलाई सम्भावित तुल्याउँदछ। यी दुबै संकेतले आफैंलाई अभिव्यक्त गर्न कठिनाई भएको छ त्यसैले कुनै पनि समयमा द्वन्द्व वा लडाई भएको छ, दुबै चिन्हले मेलमिलापको दिशामा पहिलो कदम चाल्ने सम्भावना छैन। क्यान्सर // वाटर क्यान्सर तपाईं राशिफलको सबैभन्दा भावनात्मक र संवेदनशील लक्षण हुनुहुन्छ।
पानी र आगो बस मिसिएन, र तपाईंको व्यक्तित्व भिन्नता बढ्नेछ। मीन एक अधिक निष्क्रिय र संवेदनशील प्रकारको चिन्ह हो र तपाईको धृष्टता तिनीहरूको स्नायुहरूमा आउँछ। VIRGIN // EARTH कन्या, तपाईं राशिफल मा सबैभन्दा कठिन काम राशिफल हुन सक्छ, र त्यो एक उत्कृष्ट गुण हो! तर कहिलेकाँही यसले अझ राम्रो गर्न सक्दछ केवल आफैलाई खेल र व्यक्तिगत सम्बन्धहरूको लागि केहि समय दिनुहोस्! तपाईं अक्सर कन्यालाई गलत अर्थ लगाइनुहुन्छ किनभने तपाईंलाई आफ्नो अभिव्यक्ति गर्न गाह्रो लाग्छ, तर एक पटक तपाईंले साथी बनाउनुभयो भने तपाईं अत्यन्त दयालु र वफादार हुनुहुन्छ।
तपाईं अति बुद्धिमान, प्रिय कन्या हुनुहुन्छ, जसले कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूसँग मित्रताका लागि विवेकपूर्ण तर्क गर्न सक्दछ जुन अत्यधिक बुद्धिमान पनि हुन्छ। यो वास्तवमै तपाईंको गल्ती कन्या हैन, कुम्भ राशिको मानिस एक्लो समयको लागि लामो समय र स्वभाविक हुन सक्छ // एआईआर आह, तुला। कूटनीतिक।
यस्तो देखिन्छ कि तपाईं सबैसँग मिलेर बस्न सक्नुहुन्छ! तर त्यो सधैं हुँदैन। तुला, तपाईलाई राशि चक्रको सबैभन्दा सहकारी र सुन्दर संकेतका रूपमा चिनिन्छ, तर तपाईं नाटकको प्रशंसक हुनुहुन्न। कीवर्ड, बिच्छू।
दायाँको हल्का सint्केत र तपाईं, धनु, फेरि बाटोमा हुनेछ। CAPRICORN // पूर्व मकर तपाईं कारणको स्वर हुनुहुन्छ, तपाईं जिम्मेवार हुनुहुन्छ, अनुशासित हुनुहुन्छ र तपाईंले आत्म-नियन्त्रणको कलामा महारत प्राप्त गर्नुभयो। तपाईं अत्यन्त स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र कहिलेकाँही तपाईंलाई साथीहरू बनाउन गाह्रो लाग्छ।
तपाईं जहिले पनि मीनको साथ नमिल्न सक्नुहुन्छ। कुम्भहरू तपाई जस्तो उनीहरूलाई धेरै भावुक लाग्नेछन्, बदलामा तिनीहरूले तपाईंलाई थोरै चिसो भेट्टाउन सक्छन्। फिश // पानी मीन तपाई एक रचनात्मक र कलात्मक चिन्ह हुनुहुन्छ! तपाईं कोमल र भावनाहरूमा धेरै धुनमा हुनुहुन्छ।
तपाईं धेरै दयालु र वास्तवमा एकदम निःस्वार्थ हुन भनेर चिनिनुहुन्छ। दुबै शानदार गुणहरू जब यो साथीहरू बनाउने आउँदछ। त्यहाँ वास्तवमा कुनै संकेतहरू छैनन् कि तपाईं सामना गर्न सक्नुहुन्न, तर जुम्ल्याहा समयको लागि तपाईंको लागि धेरै नै हुनसक्दछ, जीवन भन्दा ठूलो जुम्ल्याहाहरूका लागि असहज हुने झुकाव र बदलामा, जुडुवाहरूले तपाईंलाई बनाउने प्रयास गर्नेछन् तिमी को हौ?
र अब यस्तो देखिन्छ कि यो सबै ब्रह्माण्डस आज हाम्रो लागि छ, प्रिय जनावर दर्शक। हामीलाई आराम गर्न समय चाहिन्छ, तर कृपया फर्केर आउनुहोस् र भविष्यमा ताराहरूलाई बढी ज्वलन्त प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। के यो लेखले तपाईको सम्बन्धहरुलाई राम्रोसँग वर्णन गर्दछ? वा तपाइँसँग एक साथी छ जसले यस सूचीमा सबैलाई उल्ल ?्घन गर्छ? तपाईको मिल्ने साथी कुन चिन्ह हो? हामीलाई तलका टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्!
के मार्च १th एक कुम्भ हो?
उष्णकटिबंधीय राशि अन्तर्गत, सूर्य होकुम्भजनवरी २१ र फेब्रुअरी २० को बीचमा साइन इन गर्नुहोस्, जबकि साइडरेल राशिफल अन्तर्गत, सूर्य भित्र छकुम्भकरीव फेब्रुअरी १ ​​15 देखिमार्च १लीप वर्षमा निर्भर गर्दै।
हे कुम्भ। मार्च १th को हप्ताको लागि तपाईंको पढाइमा स्वागत छ। यस हप्ता हामी तपाईंको पहिलो सामान्य पgies्क्तिमा हालको सामान्य उर्जालाई हेर्नेछौं।
तपाईंको दोस्रो प row्क्तिमा हामी कुनै अवरोध वा अन्धा स्पटहरू हेर्नेछौं जुन तपाईंको समयमा यस बिन्दुमा छ। र तपाईंको अन्तिम प row्क्तिमा हामी सबै कुरा अप्रत्याशित रूपमा हेर्छौं र तपाईंको गाईडहरूको सल्लाहलाई पनि हेर्नेछौं। यो अन्तिम प row्क्तिमा पनि।
साथै, हामी अन्तमा तीन हो वा होईन भनेर प्रश्न गर्नेछौं। म तीनवटा कार्डहरू खिच्नेछु। म तपाईंलाई पज लेख गर्न पनि समय दिनेछु।
र तपाइँ तीन हरू वा कुनै प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। म ती प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछु यदि तिनीहरू व्यक्तिगत पनि थिए। त्यसो भए पनि मलाई तपाईको प्रश्न के हो भनेर थाहा छैन, हामी त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर हेर्ने छौं।
तर कुम्भ, यो राम्रो पढिएको छ, जुन म तपाईंलाई यहाँ भन्नेछु। त्यसोभए मलाई लाग्दछ कि यो तपाईंको लागि अचम्मको सफलता हुन सक्छ। मलाई लाग्छ कि तपाइँले पनि केहि छोड्नु पर्छ।
तपाईंसँग यो सत्य सी सत्यता छ र तपाईं यहाँ दुईवटा पेन्टेकलबाट तलवारको ऐससम्म जानुहुन्छ। यो लगभग एक सत्य तपाईं प्रकट हुन को लागी गरीएको छ। मलाई लाग्छ कि तपाईको अन्तिम दुई जोडी पढाइले कुनै प्रकारको सत्यता आयो वा कुनै कुराको बारे सत्यलाई बुझेको थियो।
र यसैले मलाई भावना छ कि केहि सत्य प्रकाशमा आउन सक्छ, तर हामी यहाँ हेर्नुहोस्। हो, मलाई यस्तो भावना छ कि तपाईंले सत्य स्वीकार्नु पर्छ। यो लगभग यो जस्तो छ, म अस्वीकार को एक सानो बिट को यो ऊर्जा महसुस छ कि यसलाई विश्वास छैन।
त्यसो भए, र मलाई लाग्छ यो एक कपको पाँच व्यक्ति हुन सक्छ। त्यसोभए मलाई लाग्छ कि तपाईं यहाँ फुटिएको दुधमा अलिक बढी रुन्नु सक्नुहुन्छ, तर मलाई यो सत्य हो जस्तो लाग्छ, तपाईंलाई थाहा छ मलाई यसको मतलब भनेको म घृणा गर्छु तर मलाई केहि केहि चीजबाट तपाईंबाट टाढा छु जस्तो लाग्छ। न्याय, तलवार को ऐस, यो मूल रूप मा यस मा डबल न्याय जीत हो, हेर्नुहोस्, तर अब यो तपाईं एक प्रकारको सत्य व्यवहार गरिरहनु भएको जस्तो छ उनीहरूसँग दुईवटा पेन्टेकलहरू, न्याय, कपका पाँच छन्।
फेरि, यो हुन सक्दछ कि कसैले तपाईंलाई जाल गरिरहेको छ वा कसैलाई दुईवटा पेन्टेकलका साथ ठगी गर्दैछ। अरूलाई, म यस्तो महसुस गर्दछु जहाँ तपाईंले वाइनको लागि आफ्नो स्वाद हराउनुभएको छ, तपाईंलाई थाहा छ, यस कार्डको वास्तविक अर्थ हो कि तपाईंले वाइनको लागि आफ्नो स्वाद गुमाउँदै हुनुहुन्छ। उसले ती कचौराहरूमा खस्यो जो दाखरस थियो।
ऊ रुँदैछ किनकि उसले दाखमद्यको लागि आफ्नो स्वाद गुमाएको छ। यसले केवल यो भन्न सक्छ कि अब तपाईले आफुलाई सन्तुष्ट हुनुहुन्न। केहि अब तपाइँले पूरा गर्दैन।
र त्यहाँ उदासी हुन सक्छ। जब केहि चीजले तपाईंलाई लामो समयको लागि ठूलो आनन्द दिन्छ र त्यसपछि तपाइँ निश्चित रूपमा दु: खी बनाउन सक्दैन। विशेष गरी, यो एक औषधि गुमाउनु जस्तै हो, हैन? अन्तमा म तपाईं कसैको लागि महसुस गर्दछु कि तपाईं मध्ये केही हराएको छ वा तपाईंले केही मा आफ्नो आनन्द गुमाए जस्तो लाग्छ।
तर यदि तपाईं केवल पल्टाउनु हुन्छ र यो ब्रिज देख्नुहुन्छ, दुई कप मात्र होइन, तर ब्रिज। पुल महलमा जान्छ। ऊ पौडिन पनि सकेको छैन।
उसले यी पानीहरू पार गर्न सक्दैन। त्यसोभए मसँग एउटा भावना छ कि तपाईंले यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ कि त्यहाँ धेरै छ, धेरै उत्तम छ, तपाईंको लागि अझ बढी पूर्ति गर्ने छ, लामो अवधिमा पनि। लकले सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा र टिकाउको लागि खडा गर्दछ।
केहि चीज जुन धेरै लामो समय सम्म रहन्छ। तपाईं कसैको लागि यो यस्तो हुन सक्छ कि तपाईंले भर्खर आफ्नो काम समाप्त गर्नुभयो। सायद तपाईको हालको स्थितिबाट तपाई निराश हुनुहुन्छ।
मलाई यहाँ निराशा जस्तो लाग्छ। यो यस्तो छ, हुनसक्छ तपाईंले भर्खरै एउटा काम पाउनुभयो र यो अत्यन्तै निराशाजनक छ। अरूहरूका लागि यो सम्बन्ध जस्तो हो वा तपाईंले यहाँको सम्बन्धको लागि आफ्नो स्वाद हराउनुभएको छ।
यो ती मध्ये एक चीज जस्तो छ किनभने तपाईं कसैलाई लाग्छ कि तपाईंले तलवारको इक्कासँग सम्बन्धको लागि लड्नुभयो। यो ती मध्ये एक चीज हो जुन तपाईंले व्यक्तिलाई काममा लगाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ, तर तिनीहरू त्यस्तो चीजलाई इन्कार गरे जस्तो सुन्न सक्दैनन् जुन उनीहरूका लागि एकदम राम्रो हुन सक्छ। त्यसैले तपाईंहरू मध्ये कसैलाई पनि, मलाई लाग्यो कि तपाईं टाढा जाँदै हुनुहुन्छ।
मेरो मतलब यो हैन, म यसलाई ग्लस गर्न जाँदैछु, म हुँ? र साथसाथै मलाई पनि भावना छ कि यसले तपाईंलाई सफलतामा पुर्‍याउँछ, त्यसैले हामी यस मार्गमा जान्छौं, हामी संसारमा जान्छौं, हामी यस मार्गमा जान्छौं, हामी छ वान्ड्सको स to्गतमा जान्छौं। निश्चित रूपमा तपाईको लागि कुम्भ यहाँ सफलता। तर कुंभ, हेरौं यहाँ तपाई संग दुई तरवारहरु छ, हो।
कठिन निर्णय जुन तपाईले यहाँ बनाउन खोज्नु भएको छ। सम्राट यहाँ कारोबार गर्ने क्षेत्र हुन सक्छ। तपाईं न्यायको लागि आशा गर्दै हुनुहुन्छ।
र यो छडी को पक्ष ब्रेकअप मा संलग्न हुन सक्छ। तपाईं मध्ये कोही एक सम्राटको व्यक्ति अलग देखि एक अलग हुन सक्छ र कसरी एक सम्राट-प्रकार व्यक्ति स्पष्ट हुन सक्छ, यो व्यक्ति धेरै जिद्दी छ र मलाई लाग्छ कि मलाई हठी ऊर्जा लाग्छ। यो तपाईको जस्तै लडाई गर्न को लागी तयार भएको जस्तो छ, तर उनीहरूले लडेका छैनन्।
त्यसोभए यो एकदमै स्पष्ट कथा हो कि म यहाँ आएको हुँ, कामको लागि पनि त्यस्तै हुन्छ, मलाई लाग्छ कि तपाईं कठिन मालिकसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, जुन तपाईंले यहाँ देख्नु भएको सबैभन्दा निराशाजनक कुरा हो यो सम्राटको यो उर्जा हो। के यो केवल एक कठिन व्यक्तिसँग काम गर्न को लागी हो? यो पुरुष, महिला, वा जे पनि हुन सक्छ। म मेरो कार्डमा लि a्ग तोक्दिन, तर ती सम्राटको रूपमा देखा पर्छन्।
मलाई लाग्छ तपाईले केहि प्रमाणित गर्नु पर्छ। तपाईलाई लाग्छ तपाईले केहि प्रमाणित गर्नु पर्छ। त्यसोभए, मलाई लाग्छ यो त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति हो जो काँधमा वास्तविक चिप जस्तो छ र म शब्दहरू पनि बाहिर निकाल्छु।
त्यसोभए मँ तपाई कसै कसैको लागी यस्तो भावना राख्छु, यो त्यस्तो किसिमको व्यक्ति हो जसलाई बच्चाको रूपमा छनोट गरिएको हुन सक्छ, होइन र? र यो यस्तो छ कि उनीहरूले यसलाई सबैमा लिइरहेका छन्। यो ऊर्जाको प्रकार जस्तो छ जुन मैले यो सम्राट उर्जा र यी दुई तरवारहरूबाट प्राप्त गरेको छु। मलाई लाग्छ कि तपाइँ केहि खोज्न को लागी कोशिश गर्दै थिएँ।
यहीँ म यहाँ आउँदैछु। दुई तरवारले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि तिनीहरू अघि बढ्नुपर्दछ। मानौं कि ऊ पछाडि रहेको यो नयाँ भूमिमा जान्छ।
तर वास्तवमा, मलाई लाग्छ कि तपाइँ कुनै चीजमा अडिनुभयो। यो यस्तो लाग्छ जस्तो तपाईले कोशिस गर्नुभयो तर रड्स साइडले मलाई भन्यो कि यस समयमा तपाई स्वतन्त्र भइरहनुभएको छ। मँ तपाईहरु मध्ये कसैको लागि महसुस गर्छु, जस्तो कि मैले भनें, सत्य बाहिर आउन सक्छ र त्यसैले तिमी यहाँ हिड्न सक्छौ।
यो न्याय कार्डको साथ कर्मिक जस्तै हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ कर्मको एक तत्व छ, तर मलाई वास्तवमै त्यो पनि लाग्छ, तपाई मध्ये कोहीले सत्यलाई स्वीकार्नु पर्छ। यस्तो लाग्छ कि तपाइँ यहाँ तथ्यहरु लाई ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ।
यस्तो लाग्छ कि तपाईले अहिले कुनै चीज देख्नु भएको छ। र त्यहाँ तपाईले केहि गर्न सक्नुहुन्न, तपाईलाई थाहा छ यो यस्तै छ, तपाई त्यस्तै हुनुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ? म यो सत्यको लागि लिन्छु र अगाडि बढ्छु। त्यसोभए वास्तवमा डरलाग्दो छैन।
म अलि अलि दु: खी महसुस गर्छु तर एकै साथ मलाई लाग्छ तपाई त्यस्तो बिन्दुमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं जागिर, व्यवसाय, सम्बन्ध, जे भए पनि बढ्दै जाँदै हुनुहुन्छ। यो तपाईलाई भनेको के हो भन्ने कुरा जस्तै हो? के यो सही हो? तपाईंको अवरोधहरू र अन्धा ठाउँहरूमा तपाईंको ट्रेजर आइल्याण्ड नक्शा छ, वास्तवमा राम्रो नक्सा। दोस्रो, यस डेकमा मेरो मनपर्ने कार्ड।
र यसैले यो एक कार्ड हो जुन माथिको रूपमा फेरि प्रस्तुत गर्दछ। यसैले तल यसले भन्छ जुन तपाईं आफूले चाहानुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले भर्खर यसलाई प्रकट गर्नुपर्नेछ र कल्पना गर्नुहोस्।
त्यसैले मलाई यस्तो भावना छ कि यो तपाईंको लागि ब्लक हुन सक्छ, चाखलाग्दो कुरा, मैले यस हप्ताको साप्ताहिक पठनबाट आधा बाटोमा समाप्त गरिसकें, र धेरै व्यक्तिहरूले यस्तै प्रकारको अभिव्यक्ति देखेका छन जुन उनीहरूको मध्य प row्क्तिमा आयो। त्यसोभए मसँग एउटा भावना छ कि तपाईंले विश्वास गर्नुपर्दछ कि केहि सम्भव छ। तपाईं संग छ तरवारहरु को छ, तलवार को Ace र पन्टाकलहरु को पक्ष।
म तपाईं कसैको लागि महसुस गर्दछु कि नयाँ जीवन आउँदैछ, तर तपाईंलाई यसको आवश्यक पर्दछ। तपाईंलाई थाहा छ यो अन्धा स्थानको रूपमा देखिन सक्छ किनकि यो यस्तो देखिन्छ कि तपाईंले यसलाई हेर्नुहुन्न, अझ राम्रो। केहि चीज जसले विजयलाई पुर्‍याउँछ यदि तपाइँ आफैलाई सोध्नुहोस्, यो सत्य हुन सक्छ।
म वास्तवमै भन्न चाहन्छु कि सत्य एक अन्धा स्थान थियो। विगतमा जस्तै। मलाई लाग्छ तपाईं यहाँ तलवार ऊर्जा को Ace को कारण हटाइनुभयो।
यो तपाईंसँग हो, जब तपाईं त्यस व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईंले उनीहरूलाई दिनुभयो जस्तो लाग्छ कि तपाईंले धेरै पटक प्रयास गर्नुभयो तर मलाई लाग्दछ कि अन्धा स्थान जे भए पनि हुन सक्छ, जुन तपाईंलाई सँधै सत्य थाहा थियो। मलाई मन पर्छ कि तपाईलाई यो व्यक्ति को बारे मा सँधै सत्यता थाहा छ मलाई लाग्छ कि तपाईं त्यस्तो व्यक्तिसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ जसले तपाईंलाई भने कि उनीहरू बदल्न जाँदैछन्।
उनले तपाईंलाई भने कि यी सबै अन्य चीजहरू हुन्, तर यो यस्तो छ कि तपाईंले सँधै तरवार इक्काको साथ यहाँ सत्य जान्नुहुन्छ। अरूलाई लागी, यो लगभग तपाइँको तरवार ऐस अंतर्ज्ञान जस्तै छ। उदाहरणको लागि, म यो ऊर्जा तपाईबाट महसुस गर्दछु जब त्यो काम वा व्यवसाय थियो, मलाई फेरि यस्तो महसुस हुन्छ जस्तो कि तपाईंलाई थाहा थियो केही गलत छ वा केही अनौंठो थियो र यस्तो लाग्छ कि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्न तर पाठ सिकिएको हो यो Ace संग के भन्ने हो तरवारहरूको, तरवारहरूको Ace एक पाठ सिक्नको लागि एक राम्रो नक्शा हो किनभने हामी तलवारको Ace संग सन्तुलन राख्छौं तरवार यो नक्सामा माउन्ट ईन्स माथि छ।
एक चुनौती स्थिति मा पनि, यसको मतलब यो हो कि तपाईं भविष्यबाट यो सिक्नु हुनेछ। हुनसक्छ पन्टाकल्सको राम्रो लर्निंग पक्ष, राम्रो शिक्षा, सही? निश्चित रूपमा केहि तपाइँको लागि यहाँ आउँछ। मँ लाग्छ कि तपाईहरु यहाँ कोही आउन को लागी बहाना हुन सक्छ।
जे होस्, मलाई थाहा छैन किन यो एक अन्धा स्थानको रूपमा देखिन्छ। वा तपाइँ यहाँ माफी माग्नु पर्ने हुन सक्छ, कुंभ। मँ गर्दैन, म तपाईंलाई यो प row्क्तिमा कल गर्दिन।
तर मँ के भन्न सक्छु कि तपाईले यहाँ एक व्यक्ति माफी माग्नु पर्छ। यो प्रेम हुनु आवश्यक छैन। यो साथी वा केहि हुन सक्छ।
तर मलाई भावना छ जब यो तपाईं हो, तपाईं त्यस्तो व्यक्ति जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ जसलाई तपाईं फेरि कुरा गर्न चाहानुहुन्छ। म यहाँ माफी माग्छु, तर यो एक साइड सन्देश को प्रकार हो जुन मैले पाउँदैछु। यो एक साथी हुन सक्छ मैले महसुस गरेको हुन सक्छ, सायद तपाई।
मैले माफी माग्नु पर्छ, म भन्छु, तर अब हेरौं। मलाई यो मार्गमा अधिक स्पष्टता चाहिन्छ। मृत्यु कार्ड, निश्चित रूपले एक मेटामोर्फोसिस।
मलाई लाग्छ कि तपाईं यहाँबाट हटाइएको चीजबाट फरक हुनुहुन्छ र तपाईंसँग तरवार इक्का छ, तरवार दुई पटक। म सधैं भन्छु जब कार्डहरू दोहोर्याइन्छन्, ब्रह्माण्डले के भन्छ, मेरो मतलब मैले भनेको भनेको हो। त्यसैले ब्रह्माण्डले मात्र यसको सन्देश दोहोर्याइरहेको छ मलाई लाग्छ म यहाँ धैर्य हुनुपर्दछ।
मँ यो भावना हुनै पर्छ कि तपाईले यहाँ पनि परिस्थिति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, कुम्भले यसलाई तपाईको जीवनमा फिर्ता ल्यायो। केहि हुन सक्छ। यो तपाईं कसैको लागि सम्बन्ध हुन सक्छ, तर म यो भन्दिन कि यो सम्बन्ध हो।
मलाई लाग्छ यो तपाईले चाहानु भएको केहि हुन सक्छ। मेरा सबै पढाईहरू, म ठूला चित्र रिडि likeहरू जस्तै पाउँछु जहाँ म ठूलो चित्रमा बढी केन्द्रित गर्दछु, अधिक तपाईंमा, सही? म प्रेम र सामानको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु, तर म वास्तवमै मृत्युदण्डमा ध्यान केन्द्रित गर्न जाँदैछु कि फिर्ता आउँछ र त्यस्तै छिटो। तर मँ के भन्न सक्छु यहाँ? त्यो हो, यदि तपाईं भूतपूर्व फिर्ता चाहानुहुन्छ भने, मलाई यस्तो लाग्छ कि तपाईंले यो गर्न सक्नुहुनेछ, यो ट्रेजर आइल्याण्डको नक्सासँग हुन्छ, यो नौ हो, जस्तो कि यो अझै समाप्त भएको छैन।
तपाईं कसैको लागि मसँग यहाँ एक व्यक्तिसँग यस श्रृंखलामा पेन्टकल्स वा टिमरेसन कार्डको पक्षमा राख्नको लागि एक अधूरो व्यवसायको तत्व छ। त्यसोभए यदि तपाई विगतबाट कसैलाई फर्काउन चाहानुहुन्छ भने, मसँग संचार हुनु आवश्यक छ र तपाईले कुनै न कुनै तरिकाले उक्त व्यक्तिलाई सञ्चार गर्नु पर्छ। यो मान्छे यहाँ छैन।
यदि तपाईं त्यो व्यक्तिसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो त्यो व्यक्ति होईन। म यो महसुस गर्दछु जस्तो लाग्छ कि तपाईं यो व्यक्तिबाट टाढा जाँदै हुनुहुन्छ। यो अरू कोही हुन सक्छ।
यदि तपाईं त्यस व्यक्तिसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्न भने यो स्पष्ट छ अरु कोही नयाँ हुन सक्छ किनकि पेन्टाल्स साइट नयाँ छ। पेन्ट्चालस साइट तपाईंको जीवनको लागि यहाँ कोही नयाँ छ। मलाई लाग्छ तपाई अहिले धैर्य हुनु आवश्यक छ, तर समग्रमा डरलाग्दो छैन।
मलाई लाग्छ कि तपाईंले महसुस गर्नै पर्छ तपाईंले आफूले चाहेको सबै कुरा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। हो, धेरै व्यक्तिले अनौंठो प्रकारको सोच्दछन्। मैले भर्खर जेमिनीलाई पढेको छु र धेरैजसो सोच सोच्ने शक्ति पाएको छु।
जस्तै म जुम्ल्याहा चन्द्र हुँ। र म, र म एक बढ्दो कुम्भ पनि हुँ, र म केवल दिनभर सोच्दछु, सही, 'म यो मात्र गर्छु। मलाई लाग्छ कि कार्यको आवश्यक छ।
त्यसो भए म तपाईंको अर्को प row्क्तिमा केहि चीजतिर बढ्नेछु। तपाईंको गाइड सन्देशहरूमा अप्रत्याशित कुनै कुराको लागि तपाईंसँग त्रुटिपूर्ण हार्मोनी कार्ड छ। के अप्रत्याशित कुरा यो हो कि तपाईं वास्तवमा उत्तम सद्भावमा हुनुहुन्छ।
कुरा यहाँ खास लाग्दैन, विशेष गरी सम्बन्धहरूमा। तर मलाई लाग्छ तपाईं त्यहि ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं हुनु पर्छ। यो ११ नम्बरको कार्ड हो र वास्तवमा यो तल ११ तल झल्कन्छ।
यहाँ हेर्न गाह्रो छ, तर मलाई लाग्छ ११.११ तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण संख्या हुन सक्छ। तपाईंसँग वर्ल्ड, चार कप, र छ वन्ड्स छन्, र सफलता पक्कै तपाईंको लागि आउँदैछ।
मलाई तपाईको गाईड गाईड लाग्छ। त्यो तपाईं हुनुहुन्छ। तपाईं संसारको शीर्ष कुनामा देखा पर्नुहुनेछ।
मलाई लाग्छ कि तपाईका गाईडहरू तपाईलाई चाहिन्छ, तपाईले जान्नु पर्छ, तर त्यहाँ धेरै कुराहरु सम्भव छन्। प्रत्येक एकल साइटसँग लगभग चार कपहरू छन्। म निश्चित छु कि प्रत्येक साइन-इन चार कपहरू कसरी थिए।
मलाई लाग्छ चार कपहरू जहिले पनि भन्छन कि तिनीहरू घाँसलाई सोच्न प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ अर्कोपट्टि घाँस हरियो छ जब यो छैन। तर मेरो लागि चार कप हामी भन्छौं हामी के चाहन्छौं गर्न सक्छौं। उसले आफ्नो अघिल्तिरको कुरा देखाउँदछ, तर त्यसले केही गर्दैन।
उसले ती कपहरू समात्दैन किनकि ती गर्दैनन्। यो उहाँ जस्तो चाहानुहुन्छ त्यस्तै देखिदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ कि तपाईंलाई यसको आवश्यक छ र यो सामूहिक उर्जा सन्देश जस्तै थियो।
त्यो सबै एकल चरित्रको लागि आयो। यो यस्तो छ, मलाई लाग्छ कि तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि तपाईं आफूले चाहेको कुरा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। यो यस्तो हुन सक्छ जुन तपाईलाई यो मनपर्दैन भन्ने लाग्दैन, वा यो फरक हुन सक्छ।
त्यसैले बुझ्नुहोस् कि तपाईले आफूले चाहेको कुरा पाउनु भएको छैन, तर तपाई होशियार हुनुहोस्। किनकि यो सम्भवतः फरक तरीकाले हुने छ। यसले सँधै मलाई यसको सम्झना गराउँछ।
यो जस्तो छ, व्यक्तिहरू सँधै मन पराउँछन्, पहिलो चीज के हो प्रयास गर्नुहोस्। जब उनीहरू तपाईंलाई लाखौं डलर जस्तै प्रकट गर्न कोशिस गर्छन्? र कुरा यो हो, मान्छेहरू अहिले चिट्ठामा उफ्रेर लगिए, तर यो कसरी कार्य गर्दछ, के यसले गर्दैन? त्यसोभए तपाईं एक मिलियन डलर प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ब्रह्माण्डले भन्न सक्छ, हुन्छ, अब तपाईले एक मिलियन डलर प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले तपाईको प्रेरणालाई विश्वास गर्नु पर्दछ।
जस्तो म सधैं भन्छु, तपाईं अचानक कुकुर संगोष्ठी व्यवसाय वा केहि शुरू गर्न प्रेरित हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ करोडपति कुकुर संसूचक कम्पनीहरु छन् कि ग्यारेन्टी छ, सही? त्यहाँ भनाइ छ कि यो लिनुपर्ने कदमहरू पालना गर्नु अनुभूति गर्नु जस्तै हो। र त्यसैले मलाई लाग्छ कि तपाईं मध्ये कोहीले कदम चाल्दै हुनुहुन्छ।
मानौं कि म आकर्षण को कानून लाई माया गर्दछु, तर यहाँ एक कुरा छ जुन म आकर्षण को कानून को बारे मा घृणा गर्दछु: विचारहरु जुन तपाईले केहि गर्नुपर्दैन। मेरो मनपर्ने एस्तर हिक्सलाई पनि, ठीक छ? म उनको बारेमा सबै समय कुरा गर्छु। उनी मेरो माया हुन् तर उनलाई पनि तपाईलाई थाहा छ मलाई सहजै मन पर्छ म उनी के भन्छु भन्ने कुरा बुझ्दछु।
बी तर त्यहाँ समय आउँछ जब मँ सोच्छु, होईन, मँ यो पाउँछु, मलाई गलत नबनाउनुहोस्। तर यो जस्तो छ, मलाई लाग्छ कि हामीले कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ मानव हो, हो? कामको एक निश्चित मात्रा छ जुन हामीले यहाँ चीजहरू प्रकट गर्न गर्नुपर्दछ। तर यहाँ तपाईको लागि सफलता छ, कुम्भ।
त्यसैले मलाई त्यो मन पर्छ। मलाई लाग्छ कि तपाईं यहाँ केहि चीजहरू गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि मैले तपाईंलाई थप प row्क्ति कोर्नु पर्छ।
त्यसोभए, म सम्भवत एक मिनेटमा यो गर्छु। तपाईंसँग वान्डको नाइन छ, मलाई लाग्छ कि तपाईं यहाँ अन्वेषण गर्न तयार हुनुपर्दछ, तपाईं कसैको लागि मलाई लाग्छ कि तपाईं सर्कलमा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईं सर्कलबाट बाहिरिनु पर्छ।
तपाईं कसैको लागि मलाई लाग्दछ कि तपाईंले अन्वेषण गर्न आवश्यक छ, साहसिक कार्य, सम्भवतः छुट्टी वा यात्रामा जानुहोस्, तर यो अझ लाक्षणिक पनि हुन सक्छ, त्यसैले तपाईं भन्नुहुन्छ कि वान्डको नाइनको साथ, तपाईं सहज अवसरहरूमा खुला हुनु आवश्यक छ। तपाईंसँग आठ कपहरू छन् जुन कुनै चीजबाट टाढा जान्छ। मैले भने जस्तै, कुनै आश्चर्य छैन।
यो भित्री मध्य प row्क्तिमा यहाँ कैसरको साथ आउँछ। तिमी म सँग जिस्केको? र तपाईं यहाँ फाँसी मान्छे छ। यो उल्ट्याइएको थिएन।
कुन प्रकारको अनौठो हो। म इन्भर्सन पढ्दिन। तर एउटा कुरा म भन्न गइरहेको छु कि उल्टो झुण्डिएको मानिसलाई लाग्छ कि तपाईंलाई एक कार्यक्रम गर्नु पर्छ, उसले केहि नाच गर्यो जस्तो कि ऊ पछाडि पछि नाचिरहेको छ।
त्यसोभए तपाईलाई लाग्छ कि यसो नगर्नुहोस्, नहुनुहोस्, केहि अरू पाउनको लागि प्रयास नगर्नुहोस्। मलाई यो संचार जस्तो लाग्छ कि तपाई यहाँ दुई पटक तरवारको Ace को प्रतिक्षा गरिरहनु भएको छ यदि सत्य तपाईको कसैको लागि आउनु पर्छ जस्तो कि म यो दुई मान्छे को रुपमा देख्छु, यहाँ तरवारको Ace मा दुई पटक मैले महसुस गरेको छु कि दुई व्यक्तिहरु हुन सक्छन सत्य भन्नु। यो हुन सक्छ, यो दुई मान्छे हुन सक्छ।
यो त्यस्तो व्यक्ति हुन सक्दछ जुन तपाईंले विगतमा व्यवहार गर्नु भएको थियो र तपाईं, म यो भन्न प्रयास गर्दै छु, तर ज्ञान पक्कै पनि यहाँ आउँछ। मसँग यो संचार आयोन छ। निश्चित रूपमा तपाईको लागि राम्रो खबर छ।
मलाई यस्तो लाग्छ कि तपाईको पढाइबाट यहाँ केहि अरु बाहिर आउनु पर्छ। कुम्भ, टावर बूम, जाऔं। टावर, रड र को सूर्य को पक्ष।
भाग्यले साथ दिओस् । मलाई लाग्छ खुशी भनेको एक क्षण बलको पछि आउँदछ यसले के भन्छ। मलाई लाग्छ कि यो यात्रा को भाग हो कि कसै-कसैको भनाइमा मलाई लाग्छ तपाईं गत महिनाहरूमा फाउन्डेसनमा घटिनुभयो धेरै गाह्रो भएको छ।
सायद यहाँ सूर्य को साथ गर्मी को लागी, Julisisch तब देखि यहाँ छ। तर मलाई लाग्छ कि यो यात्राको हिस्सा हो र यहाँको भडकाडको कारणले र मलाई यस्तो लाग्छ कि तपाईं सूर्यमा फर्कनुभएको छ। यो लगभग एक चंद्र अवधि को माध्यम बाट जा जस्तै छ।
सूर्य सौर र चन्द्र ऊर्जाको संयोजन हो। यस कार्डमा सिधा किरण र हल्का किरणहरू छन्। तर मलाई लाग्छ कि तपाईं यहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
त्यसैले मलाई यो मन पर्छ। म राम्रो महसुस गर्छु। यो श्रृंखला यहाँ पनि सफा गरौं, कुम्भले प्रेमीहरूलाई दिन्छ।
त्यसैले यो प्रेम र तलवारको रानी को लागी पतन हुन सक्छ। र अब तपाईंलाई थाहा छ के गर्ने र तपाईंसँग सन्नीत छ। तपाईंले यहाँ आत्मज्ञानको लागि केही आत्मा खोजीहरू गर्नुभयो।
ह्या Hang्ग तपाईंले शाब्दिक रूपमा आफैलाई निलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ र भिन्न कोणबाट चीजहरू देख्नु भएको छ ताकि तपाईं ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं घाममा भाग्यमानी हुनुहुन्छ र तपाईंसँग आनीबानी छ, जुन तपाईंलाई तपाईंको भित्री प्रकाश पत्ता लगाउन मद्दत गर्न अर्को कार्ड हो। तपाईं कसैको लागि यति धेरै ज्ञान, मलाई लाग्छ कि तपाईंले महसुस गरिरहनु भएको छ कि जस्तो कि तपाईंलाई थाहा छैन अन्य व्यक्तिको भावनाहरू तपाईंको बारेमा के हो।
म यहाँ व्यक्तिहरूका भावनाहरू स्वीकार गर्ने बारेमा अनौंठो सन्देश पाउँदैछु वा मलाई तपाईको बारेमा एक्वेरियस कसरी बोल्ने भनेर अरू केही थाहा छैन, तर मलाई लाग्छ तपाईले चिन्नु भयो, वा मान्यता पाउनु भयो, वा उनीहरुको भावनाहरु छन् कि तपाईले व्यक्तिलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। किनकि तपाईलाई वास्तवमा थाहा छैन कि यो सत्य हुन सक्छ। यो यहाँबाट धेरै तरिकाले बाहिर आउँछ, यो भावना प्राप्त गर्दै। यो तपाईं हुन सक्नुहुनेछ, यो तपाईंको व्यक्ति हुन सक्दछ कि यसले कसरी कुम्भलाई प्रतिध्वनि बनाउँछ।
तर, तपाइँलाई थाहा छ, म तपाइँ कसै कसैको लागि यस्तो महसुस गर्दछु कि तपाइँले उनीहरूको भावनाहरू लिने व्यक्तिको रूपमा छोड्नुभएको छ, तर यो त्यस्तो हो जस्तो कि तपाइँले कहिल्यै पनि थाहा पाउनु भएन कि तिनीहरूका भावनाहरू यस व्यक्तिको साथ दोस्रो मौकाको रूपमा के हुन्, यदि यो सन्देश हो भने। तपाईका लागि हो, अरुहरूका लागि यो तपाई पुन हुन सक्छ। र मलाई फेरि त्यहाँ त्यहाँ दोस्रो मौका हुन सक्छ भन्ने भावना छ। हो तपाईको धेरैको लागि त्यहाँ धेरै छुटानाश ऊर्जा छन् जुन मलाई लाग्दछ कि प्रायः तपाईंले माफी माग्नुहुनेछ, चाहे यो तपाईं वा उनी, त्यो माफी हो, यसले केही फरक पार्दैन।
यो केहि समयको लागि यस ठाउँमा आउनु जस्तो हो। यो राम्रो छ कुंभ यहाँ पढ्न। म तीन हो वा कुनै प्रश्नहरू तान्दैछु जुन एक, दुई, र तीन हुनेछन्।
यस लेख पज गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। यदि तपाईंलाई आफ्नो प्रश्नहरू सोच्नको लागि समय चाहिन्छ भने म तपाईंलाई छिटो हो वा होईनँ। जब म तपाईंको प्रश्न जान्दछु म तपाईंलाई छिटो छिटो सार दिन्छु।
तपाईंसँग पेन्टेकलहरू छन्, हो, निश्चित रूपमा ल्या, मलाई भावना छ तपाईं भविष्यमा सफल हुनुहुनेछ। तपाईले जे पनि सोध्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ यसले सावधानीपूर्वक काम गर्दछ। मलाई लाग्छ तपाइँ विवरणहरूको बारेमा धेरै सावधान हुनु पर्छ।
र म धेरै काम महसुस गर्दछु, तर मलाई लाग्छ कि तपाईले मागेको कुराबाट त्यहाँ धेरै सफलता प्राप्त हुनेछ। यदि तपाईं प्रेमको लागि सोध्नुहुन्छ भने पनि, मलाई त्यस्तो लाग्दछ कि यसको मतलब तपाईं आपसी शिक्षाको चरणमा हुनुहुन्छ र कार्ड नम्बर दुईको लागि अगाडि बढ्न अझ बढी कामको आवश्यक पर्दछ। पक्कै हो।
यो तपाइँको लागि ठूलो उपलब्धि हो। तपाईं कसैको लागि, मलाई लाग्छ कि तपाईंले यस भूतपूर्वको बारेमा सोधिरहनु भएको छ जो यहाँ छ। देखाउँदै वा विगतका कसैलाई महसुस गरीरहेको छ कि तपाईं यो व्यक्ति, एक सुखी परिवार संग एक खुशी घर हुन सक्छ।
पेन्टाकलहरु का दस खुशी घर, एक खुशी परिवार छैन। यो राम्रो छ। यस्तो लाग्छ कि तपाई यस व्यक्तिसँग साम्राज्य निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेमको लागि सोध्नुहोस् र जस्तो हुनुहोस् तपाईले यो व्यक्तिसँग साम्राज्य निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ जुन पेन्टेकलमाजोको सफलताको साथ दसको साथ अरुको लागि शुभकामना पनि मलाई पनि यहाँ केहि जान्नु पर्ने महसुस हुन्छ।
उदाहरण को लागी, जब तपाईं पैसा वा वित्त को बारे मा सोध्नु हुन्छ, मलाई लाग्छ सिक्नु को लागी अधिक छ। र यदि तपाईंले त्यो गर्नुभयो भने, तपाईं सफल हुनुहुनेछ। र कार्ड नम्बर तीनका लागि, म भन्नेछु, हो, यो कति पागल हो? मैले भने खुशीयाली घर, खुशी परिवार।
र हामी जाऔं। त्यसो भए कठिनाइ पछि भाग्य को दस कप। पक्कै हो।
मलाई यो भावना छ कि यस नक्शामा त्यहाँ सुधारहरू छन्। धेरै राम्रो कुंभ। त्यहाँ भएर भएकोमा धन्यबाद।
म यसलाई धेरै कदर गर्छु। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको सूर्य, चन्द्रमा, र त्यस समयमा तपाईंको लागि के भइरहेको छ को पूर्ण चित्रको लागि उदय गर्नुहोस्, र लाइक गर्नुहोस्, र ग्राहकहरूले समर्थनलाई कदर गर्दछन्, तर धन्यवाद र निश्चित रूपमा तपाईको हप्ताको मजा लिनुहोस्।
१ 14 मार्चमा मानिस कसरी जन्मिन्छन्?
मार्च १th को जन्ममिति भएका व्यक्तिहरू हुन्मीन, मीन राशिको बाह्रौं चिन्ह अन्तर्गत जन्म। तिनीहरूको शासक ग्रह नेप्च्यून हो। तिनीहरू जीवनको रचनात्मकता र बुद्धिमत्ताको मार्गमा हिंड्छन्। यद्यपि सजीलो सजिलो जस्तो देखिन्छ, यस दिनमा जन्मेका मानिसहरू आफ्नो इच्छाहरूमा ब to्ग्याउनमा धेरै राम्रो हुन्छन्।१। २०२१
मार्च १ does को जन्म हुनको मतलब के हो?
यदि तिमीजन्मिएको होखुल्लामार्च १, तपाईंछन्समर्पित पिसियनहरू। अवसर मा, तपाईंछन्रहस्यमय चीजहरू वा तन्त्रमन्त्रसँग काम गर्ने विषयहरूमा रुचि राख्दछ। तीजन्मभित्रमार्चयो दिनमाछन्Pisceans जो केहि कठिनाई बाट मित्र बनाउँछ तर जब तपाईंगर्नुहोस्, योछएक आपसी समझ को कारण।
मेष कसले विवाह गर्नुपर्छ?
यससँग सब भन्दा मिल्दो संकेतहरूमेषसामान्यत: मिथुन, सिंह, धनु र कुम्भ हो। यसका साथ कम से कम मिल्दो संकेतहरूमेषसामान्यतया क्यान्सर र मकर मानिन्छ। सूर्य संकेतहरू तुलना गर्दा अनुकूलताको राम्रो सामान्य विचार दिन सक्छ।
१ the मार्चमा के भयो?
१ 19 .64: राष्ट्रपति क्यानेडीको कथित हत्यारा ली हार्वे ओसवाल्टको हत्याको आरोपमा ज्याक रुबीलाई दोषी ठहराइएको छ, उनलाई मृत्युदण्ड सुनाईयो। १ 19::: जोन एफ। क्यानेडीको शव अर्लिtonटन राष्ट्रिय कब्रिस्तानमा स्थायी चिहानमा सारियो।
मीन शत्रु को हो?
माछासंवेदनशील र कल्पनाशील हुन्छन्। तिनीहरू कन्या र मिथुनसँग यति राम्रो छैनन् किनकि यी दुई चिन्हहरू प्रायः सबै कुरा हेर्ने तिनीहरूको तरिका बुझ्न सक्दैनन्। मिथुन अरूसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न चाहन्छ रमाछायसको बारे धेरै लाज लाग्छ। कन्याले सीमाहरुमा विश्वास गर्दछ, जसले पिसियनहरुलाई धेरै दुख दिन्छ।२ २०२०।
मार्च १,, २०१ 2019 को राशिफलहरू के हुन्?
मार्च १ Hor कुंडली। मार्च १th राश राशि एक मीन जातिको मार्च १ P मा जन्म, तपाईं एक प्रयोगात्मक र भावुक प्रकृति द्वारा परिभाषित छन्। जबकि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले परिवर्तनलाई डर दिन्छन्, तपाईं उनीहरूमध्ये हुनुहुन्न। तपाइँ कुनै नयाँ अवसर प्राप्त गर्न कुनै पनि अवसरमा हाम फाल्नुहुन्छ र एक पटक केहि पनि प्रयास गर्नुहुनेछ। तपाइँको प्रयोगको इच्छुकताको परिणामको रूपमा, ...
यदि तपाइँ मार्च १ on मा जन्मनुभयो भने के हुन्छ?
यदि तपाइँ मार्च १ 14 मा जन्मनुभयो भने, जन्मदिन ज्योतिष देखिन्छ कि तपाइँ तपाइँको आफ्नै दिमाग संग सम्पन्न हुनेछ। तपाई स्वतन्त्र र ज्ञानको पछि लाग्नुहुनेछ। बहुमुखी प्रतिभा र तपाईंको वाचवर्ड्स हुनेछन्। यो तपाइँको राशिफल प्रतीकको रूपमा मीन जातिको परिणामको रूपमा हो।
मार्च १ on को राशिफलमा सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो?
सबैभन्दा चम्किलो तारा भान मानेन हो जबकि सम्पूर्ण गठन 88 88 s वर्ग डिग्रीमा फैलिएको छ। ग्रीसमा यसलाई इहथिस भनिएको छ र फ्रान्समा पोइसन भन्ने नामबाट जान्छ तर ल्याटिन मूलको मार्च १ z का राशिफल चिन्ह, माछा मीनको नाम हो।